I-UKZN ikleliswe yaba eyesine eNingizimu Afrika ngokokukleliswa kwe-Times Higher Education.Click here for English version
USolwazi Tricia Naicker, uSolwazi omncane waseKolishi leSayensi yezeMpilo e-UKZN.Click here for English version
USolwazi osemusha nomncane eKolishi lezeSayensi yezeMpilo e-UKZN, uSolwazi Tricia Naicker, uphinde waklonyeliswa nge-Raikes Medal yangowezi-2020 yi-South African Chemical Institute.
Le ndondo iklomelisa ilungu le-Institute, elingaphansi kweminyaka engama-40, elinocwaningo oluthembisayo kwezamakhemikhali eNingizimu Afrika, njengoba kubonakala emaphepheni ocwaningo ashicilelwe emabhukwini ocwaningo ahlonishwayo.
U-Naicker ungomunye wosolwazi abathathu, nokuphela komuntu wesifazane oyedwa, wase-UKZN ukuzuza indebe ye-Raikes kusukela yasungulwa ngonyaka we-1961.
‘Ngijabule kakhulu ngokunqoba kulo munxa futhi ngiyabonga kongiqokile nokade aba yisibani sami uSolwazi Gert Kruger,’ kusho u-Naicker ejabule.
Ngaphezu kwaloku akuzuzile, u-Naicker unqobe uMklomelo wangowezi-2019 weSekelaShansela wenani lama-R150 000. Lo mklomelo minyaka yonke unikwa umcwaningi ovelele e-UKZN ngempumelelo yakhe kwezocwaningo negama elihle emhlabeni wonke.
Into enkulu asanda kuyizuza kube wukufinyelela ephepheni locwaningo ngonyaka wezi-2020. ‘Ngethemba ukuthi impumelelo yami ikhuthaza izifundiswa ezisafufusa nabafundi ukuthi bafeze amaphupho abo kunoma yisiphi isihloko abanaso,’ kusho yena.
U-aicker, osebe kwi-Discipline of Pharmaceutical Sciences kusukela ngowezi-2013, uhlale ebalwa nabacwaningi abayishumi abavelele e-UKZN. Unoxhaxha lwemiklomelo yoMnyango wezeSayensi nezobuChwepheshe ne-NRF.
Ugxile ekwenzeni izindlela zokukhiqiza imithi ngokwemvelo emkhakheni wokwelapha.
U-Naicker ubonge abafundi bakhe abasebenza ngokuzikhandla, abamqeqeshayo abazinikele nabambisene nabo e-Catalysis and Peptide Research Unit, wangakulibala ukwesekwa wumndeni wakhe.
IPhini leSekelaShansela laseKolishi leSayensi yezeMpilo, uSolwazi Busi Ncama, limhalalisele u-Naicker ngempumelelo yakhe. ‘Ngiyaziqhenya ngokuthi uSolwazi Tricia Naicker uyisifundiswa eKolishi lethu. Angimangali ezuze lo mklomelo; ungumcwaningi osezingeni eliphezulu, uzinikele kakhulu futhi uthobeke kakhulu.’ Uthe umphakathi waseNyuvesi nawo uyaziqhenya ngo-Naicker, wamkhuthaza ukuthi aqhubeke nokuphakamisa igama le-UKZN.
Owayengumfundi wase-KZN uNks uDuduzile Sibisi.Click here for English version
Owayengumfundi weziqu ze-Bachelor of Optometry uNks Duduzile Sibisi unamagumbi amabili okuhlola amehlo nakuba esemncane eneminyaka engama-25 vo kanti unezinhlelo zokuba namanye!
UNks Sibisi, owakhulela edolobhaneni lasemakhaya laKwaZulu-Natali i-Dannhauser, waphothula izifundo zakhe eWestville ngo-2016.
Manje ungumnikazi weSibisi Optometrists eTugela Ferry nomunye wabanikazi be-Central Medical Centre eMgungundlovu, eyasungulwa ngonyaka odlule.
‘Ngibambisene noMnu uSthembiso Bhengu e-Central Medical Centre, lapho kunguye ozinze khona ngenkathi mina ngizinze eTugela Ferry,’ kusho uNks Sibisi.
Waqala ukusebenza e-Torga Optical eMonti ngaphambi kokuthi athathe isikweletu sokuqala sebhizinisi lakhe.
‘Ngenza ucwaningo oluncane ngokuthi kungangibiza malina ukuvula indawo yami, ngenza uhlaka lwebhizinisi; angikaze ngibheke emuva kusukela ngaleyo nkathi,’ kusho yena. ‘Ngavula igumbi eTugela Ferry ngoLwezi wangowezi-2017.’
UNks Sibisi uthe ngenkathi eqala ukufundela i-opthomethri akukuningi ayekwazi ngalo mkhakha futhi engakaze ahlole ngisho amehlo. ‘Ngenxa yokuthi kwakuzwakala kuwumsebenzi omuhle ngaleso sikhathi, ngawuthatha. Njengomuntu okhuthele nozikhandlayo, ngayithanda i-opthomethri kanti konke sekuwumlando.’
Ekuqaleni konyaka odlule waqala ukusebenzisana nodokotela ababili uDkt uSanele Mdluli noDkt uSaziso Mthembu bavula i-Central Medical Centre eMgungundlovu.
Ngaphezu kwendawo yakhe, amanye amagumbi ngawe-occupational therapist, ungoti wokuzivocavoca, usohlalakahle, i-dietician ne-clinical psychologist.
‘Ukuba wusomabhizinisi omncane akulula; kuwumsebenzi omkhulu. Ngikwaze ukuphumelela ngenxa yamakhono ami obuholi nawokuxhumana.’
Ukhuthazwa wukuphumelela emsebenzini. ‘Ngiwumuntu onamaphupho nongenqeni ukuzama inhlanhla; yiloko okungikhuthazayo. Umama nomndeni wami wakhe yibona abangeseka kakhulu, nabangixhasayo.’
Isifiso sakhe wukuvula amanye amagumbi emadolobheni asemakhaya ukufukula imiphakathi yakhona.
UNks Sibisi ufisa ukwenza iziqu zeMasitazi nezobudokotela, agcine engumfundisi ‘Ukwabelana ngolwazi nokufundisa ngezinye zezinto engizithandayo.’
UDkt Clinton Veale weSikole seKhemistri neFiziksi.Click here for English version